Akhristow Waxa dhici karta in xaq darro iyo dulmi lagugula kaco, hadana dulmigaasi uu noqdaba wadadii badbaadada .. Waxa dhici karta inaad dareento ciriiri, diiqad iyo cadaadis la moodo in samadu kugu soo dhacday, hase ahaatee mar qura ayaa Albaab kuu furmaa oo aad ka baxdaa walwalkaas iyo wal-bahaarkaba..
Bal Qisadaan Arag: Waagii jaahiliga waxa jiray qoom carbeed oo lahaa gabar madow oo adoomad ahayd .. Maalin maalmaha ka mida gabar gashaantiya oo ka soo jeeda reerkaas ayaa soo aaday dhanka suuliga, si ay u qubaysato. Waxayna gabadhaasi sidatay Maro qaaliya oo dhexda dumarku ku xirtan waagii hore waxayna maryaheedii dhigtay suuliga dibadiisii.
Kadibna Shinbirta la dhaho Farogoosatada ayaa aragtay maradii dhexda lagu xiran jiray, taasoo midabkeedu ahaa Guduud. Waxayna u malaysay inuu Hilib yahay, wayna daftay oo la duushay.
Markii ay gabadhii suuliga ka soo baxday ayey wayday Maradeedii, kadibna waxay ku tuhuntay in gabadhii Madoobayd ee adoomada ahayd inay xaday maradii.
Reerkii oo dhan ayaa gabadhii garaacay, wayna fatisheen, xataa waxay baareen xubinkeeda taranka, ayaduna waxay leedahay un: “maradiinii waxa qaatay Shinbirta faragoosatada”
Mudo markii xaq darro lagu garaacayey, ayaa Ilaahay amarkii, waxa soo laabatay shinbirtii, waxayna hortooda kusoo tuurtay Maradii .. Gabadhii ayaa tiri: waa taas maradiinii aad igu garaacayseen, aniguna baribaan ka ahaa wixii aad igu tuhmayseen.
Dabadeedna gabadhii way sii daayeen, waxayna gabadhii soo aaday magaalada Madiina, waxayna la kulantay Rasuulkii Ilaahay (scw), wayna islaamtay .. Maadaama aanay ehel iyo qaraabo midna lahayn, waxay ku dagtay qol ku yaala masaajidka Rasuulka (scw). Waxayna la fadhiisan jirtay marwo Caasha Ilaahay raali haka ahaadee.
Markay hooyo Caasha la fadhido, waxay akhrin jirtay maalin kasta baytkan ama meeriskan gabayga ah:
”Maalintii Maradu waxay ka mid ahayd mucjisooyinka Rabbigeena. Waar hooyaay, dhulkii gaalada ayuu iga badbaadiyey” .. Marwo Caasha ayaa waydiisay maxay ahayd maalinta Marada? Kadibna gabadhii ayaa qisadan uga warrantay.
Qisadan oo uu soo saaray Imaamu Al-Bukhaari, Waxay daliil u tahay in marar badan dhibaatooyinka kugu dhacaa ay noqon karaan furaha farxadaada iyo guushaadaba.
Qofkuna hadii aanu waligii murugoonin, ama aanu wal-bahaarin ama dhibaato aanay ku imanain, ma dareemayo farxada iyo guusha u timaada macnaha ay leedahay .. Dhibaato waxay u timaadaa inay dhamaato, muruguna waxay u timaadaa inay gabogabowda, walwalkuna wuxuu u yimaadaa si aad farxad u dareento, ciriiriga iyo diiqaduna waxay u yimaadaan si aad u barwaaqowdo.
Waxa laga yaabaa inaad nacdaan wax, wuxuuna idiin yahay khayr, waxa laga yaabaa inaad jeclaataan wax, wuxuuna idiin yahay shar, Ilaahbaana garanaya, idnkuna ma ogidin.